I Jamaika no mitarika ny fanovana nomerika amin'ny fizahantany, hoy i Bartlett
Home » Travel Technology News » I Jamaika no mitarika ny fanovana nomerika amin'ny fizahantany, hoy i Bartlett
Nilaza ny minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika fa ny Minisitera dia mamorona rafitra hametrahana an'i Jamaika ho lasa toerana marani-tsaina ary hamorona vahaolana amin'ny fanovana nomerika.
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, nilaza fa ny Minisiterany dia mamorona rafitra mba hahatonga an'i Jamaika ho lasa toerana marani-tsaina. Nomarihiny ihany koa fa io no nahatonga ny firenena ho lohalaharana amin'ny fampifanarahana sy famoronana vahaolana ho an'ny fanovana dizitaly izay mitranga manerantany amin'ny indostria.
Ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika, vao haingana no namarana ny fankalazana ny Herinandron'ny fahatsiarovan'ny fizahan-tany, eo ambanin'ny lohahevitry ny Firenena Mikambana momba ny fizahan-tany eran-tany (UNWTO) ho an'ny Andro maneran-tany fizahan-tany, 27 septambra - 'fizahan-tany sy ny fanovana nomerika.
“Ny lohahevitra ho an'ny Herinandron'ny fahatsiarovan-tena momba ny fizahan-tany amin'ity taona ity dia miresaka momba ny fanovana nomerika natao tao amin'ny fizahan-tany. Nanetry tena aho noho ny fahitan'ny firenena maro hafa ny zavatra nataontsika fa nampiasa ny ankamaroan'ireo fandraisana andraikitra ho maodely azon'izy ireo ampiasaina any amin'ny fireneny. Ny rafitra Linkages manokana dia nanapotika ny hetahetan'ny mpitsidika anay ary namorona hetsika vaovao sy tarihin'ny teknolojia hihaona tsara amin'ny tombontsoany manokana, "hoy ny minisitra Bartlett.
Nanamarika ny minisitra fa ny lohahevitra nofidina UNWTO dia zava-dehibe satria maro ny matihanina amin'ny indostria no mila mampiasa teknolojia hanararaotra azy ireo fa tsy matahotra sao misy vokany manakorontana izany.
Ny mpitantana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Jamaica Vacations Ltd., Francine Haughton, dia manazava ny asan'ny monitor digital 'Happy na Not', ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Tour Action Club nandritra ny Forum World Tourism Day Forum natao ny 27 septambra 2018 tao amin'ny Montego Bay Convention Center .
“Ny fironana teknolojia vaovao dia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny tontolon'ny dia ary manome lanja ny fomba fanaovan-javatra hatrizay. Miaraka amin'ny haitao nomerika mametraka ny toerana itodian'izao tontolo izao eo an-tanan'ny olona rehetra, ny fifaninanana toekarena fizahan-tany dia miankina amin'ny fahafahany mampiasa io teknolojia io ho tombontsoany.
Mamorona haavon'ny mangarahara izay tsy mbola hitan'izao tontolo izao. Ao amin'ny Time Nano dia afaka mahazo valiny lehibe amin'ireo mpitsidika anay izahay izay afaka manampy anay hanatsara, hitombo ary hahazo bebe kokoa. Ity angon-drakitra sarobidy ity dia mitarika ny mombamomba ny demografikan'ny tsena, izay fitaovana lehibe handroahana fanapahan-kevitra ”, hoy i Bartlett.
Nomarihiny fa ny Minisiterany dia nampiasa ny Herinandron'ny fanentanana momba ny fizahan-tany, izay nanomboka ny alahady 23 septambra teo, mba hanasongadinana ny sasany amin'ireo hetsika lehibe napetraky ny minisiterany hananana teknolojia
“Ny tambajotran-tserasera fizahan-tany dia namorona Taste Jamaica Mobile App izay manome fidirana amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao mankany amin'ireo toerana mafana, sakafo sy làlan-tsakafo ary hetsika mifantoka amin'ny sakafo. Mandritra izany fotoana izany dia mampiroborobo ny trano fisakafoanana sy toeram-pisakafoanana manerana an'i Jamaika izy. Ny Network ihany koa dia nanolotra sehatra an-tserasera Agri-Links Exchange Initiative (ALEX), izay manamora ny fividianana sy ny fifanakalozana entana eo amin'ny tantsaha sy ny mpividy ao amin'ny sehatry ny hotely any an-toerana, "hoy i Bartlett.
Nizara ihany koa izy fa ny Birao Mpizahatany ao Jamaika (JTB) dia manana Visitjamaica.com vaovao feno sy marimaritra iraisana, izay manova ny fomba fifandraisan'ny Destination Jamaica amin'izao tontolo izao. Ny vavahadin-tranonkala dia ao anatin'ny paikadin'ny JTB ankapobeny hifaninana amin'ny tsena manerantany izay miovaova hatrany ary koa ny famolavolana ny fomba marketing ary hampiroboroboana an'i Jamaika ho toeran-kaleha.
“Heveriko fa ny mety tiako indrindra amin'ity tranonkala vaovao ity dia ny fanomezana fidirana sy votoatin'ny fotoana maharitra ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany sy ireo mpitsangatsangana maneran-tany mamela azy ireo hahomby kokoa amin'ny fivarotana an'i Jamaika. Io dia hahafahan'ireo orinasantsika madinidinika ao amin'ny fizahantany mahazo tombony mivantana ", hoy ny minisitra.
Nandritra ny Herinandron'ny fanentanana momba ny fizahan-tany, ny Minisitera sy ny masoivohony dia nampifandray ny tanora tamin'ny alàlan'ny famoronana fifaninanana marketing nomerika, ary koa ny fandraisana forum momba ny teknolojia amin'ny fizahantany - izay natokana ho an'ny mpikambana ao amin'ny JTB tantaran'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany JTB.
Ho fanampin'izany, nampiditra tamin'ny fomba ofisialy ny firenena tamin'ny fitaovana fanaraha-maso nomerika vaovao "Faly na tsia" ny Minisitra izay napetraka ao amin'ny seranan-tsambo mba hanara-maso ireo traikefa mpitsidika amin'ny fotoana tena izy. Ny monitor dia fitaovana tsotra iray izay mampiasa emojis ekena eran'izao tontolo izao hahazoana ny haavon'ny fahafaham-po.
“Azontsika ampiasaina ity angona ity mba hamaritana ireo olana, hanamorana ny antony mora foana, ary hanao hetsika fanatsarana izay azo refesina sy hamarinina. Izy io koa dia ahafahana manao hetsika haingana izay azo atao indraindray na dia alohan'ny sambo sambo na fotoana fohy aorian'izay », hoy ny fanazavan'ny minisitra.
Ny minisitra Bartlett dia any London ankehitriny, miaraka amin'ny talen'ny fizahan-tany Donovan White, manatrika ny tsenan'ny JTB's Jamaica Travel Market. Hampiasa ny fotoana hihaonana amin'ireo mpandraharaha mpizaha tany faratampony any Angletera izy ireo hizara fivoarana mahaliana sy tolotra vaovao any Jamaika. Antenaina hiverina any amin'ny nosy ny minisitra amin'ny 30 septambra 2018.